Obama oo ku eedeeyay Donald Trump inuu siyaasadiisa u ekeynayo mida Madaxweynaha Ruushka | HEEGAN
Obama oo ku eedeeyay Donald Trump inuu siyaasadiisa u ekeynayo mida Madaxweynaha Ruushka
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhaliilay Musharaxa Madaxweynaha ee Xisbiga Jamhuuriga Donald Trump inuu siyaasadiisa u ekeynayo tan Madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin, oo uu had iyo jeer ammaan u jeediyo.
Donald Trump ayaa dhowr jeer oo hore u sheegay inuu xiriir dhow la yeelan doono Madaxweynaha Ruushka, hadii uu ku guuleysto xilka.
Obama ayaa sheegay in arrintan ay tahay mid aan looga baran siyaasada Mareykanka, maadaama dagaal qabow uu kala dhaxeeyo Ruushka.
Madaxweyne Obama ayaa ugu baaqay Donald Trump inuu joojiyo calaancalka, kaddib markii ay ka soo yeertay in doorashada bisha November looga shuban doono.
“Waligee nolosheyda ma arkin qof musharax oo isku dayaya in uusan waxba ka soo qaadin doorashooyinka, ka hor inta aanay cod bixinta dhicin waana arrin aan ku saleysneyn wax xaqiiqo ah, Trump waxaa ugu baaqayaa inuu calaancalka iyo qeylada joojiyo waa inuu kiiskiisa codod u helo”ayuu yiri Obama.
Obama ayaa balan qaaday hadii Donald Trump ku guuleysto Madaxtinimada Mareykanka inuu xilka si nabad ugu wareejin doono, isla markaana Aqalka Capitol uu geynayo, isla markaana uu sameyn doono sida Madaxdii hore ay sameeyeen.
Donald Trump oo taageerayaashiisa la hadlayay ayaa sheegay in doorashada dhici doonta November uu ku guuleysan doono, isagoo xusay inay dib ula wareegi doonaan Aqalka cad.
Saadaal la sameyay ayaa muujinaya in Musharaxa Xisbiga Dimoqraadiga Hillary Clinton ay ka dhibco badan tahay ninka la tartamayay Donald Trump.